Warbixinta Hyperbaric - Tekna Hyperbaric wuxuu ku hadlaa luqaddaada!
Home/Posts/Sawirrada Blog/Hyperbaric News - Tekna Hyperbaric wuxuu ku hadlaa luqaddaada!
Tekna wuxuu ka hadlaa luqaddaada!
Tekna Chamber of Hyperbaric website-ka waxaa si xirfad leh loogu turjumay luuqadaha kala duwan ee 105 iyaga oo luuqadooda u gaar ah luuqad gaar ah. Websaydhadaan cusub ee luqadda ah waxay u ogolaanayaan Tekna Sales Online iyo Suuq-geynta Suuq-geynta si ay ula falgalaan macaamiisha qiimaha leh ee luqaddooda oo dhan.
Shabakadaha intooda badani waxay isticmaalaan Google Translate ama kuwa kale ee turjubaanada ah kuwaas oo dhaawici kara kalsoonidooda macaamiishooda sababtoo ah khaladaadka turjumaadda iyo naxwaha ayaa soo saara tarjubaanada tarjumaadda.
Waxaan rajeyneynaa xulashadayada in ay isticmaalaan Turjumidda Xirfadleyda waxay sameyn doonaan isdhexgalkaaga Tekna si sahlan oo xiiso leh.
Aad ayaan ugu faraxsannahay tayada, shaqada, iyo kalsoonida labadeena Model 6000 Multiplace Chambers.
About the Author: teknamfg